I-21 ENGUMMANGALISO WOYILO LWASEKHAYA I-IDEAS KUNYE NOKUHOMBISA (IMIFANEKISO) - IINGCAMANGO ZEGUMBI LOKUPHILA
Eyona Iingcamango Zegumbi Lokuphila I-21 engummangaliso woyilo lwasekhaya I-Ideas kunye nokuhombisa (imifanekiso)
Ezi zimvo zemidlalo yeqonga zibonisa amagumbi ahlukeneyo aneescreen ezinkulu kunye nokuhonjiswa okuphezulu kunye nempahla. Indawo yemidlalo yeqonga efanelekileyo ifana nemvakalelo oyifumanayo kwindawo yemidlalo bhanyabhanya yokwenyani ngayo yonke into ekhuthazayo ekumameleni nenduduzo yekhaya lakho. Ukudala imeko-bume efanelekileyo yeqonga lasekhaya kufuna ukucwangciswa ngononophelo kunye noyilo kugxininiso kwigumbi le-acoustics, izixhobo zombane kunye nokuthuthuzela ukufezekisa olona lwazi lubalaseleyo lwe-cinema. Apha ngezantsi kukho igalari yemifanekiso eneenkqubo ezintle zemidlalo yeqonga. Sazise ukuba yeyiphi oyithandayo.
Kumfanekiso ongentla koyilo lwala maxesha lwasekhaya luyilwe kakuhle, ngemigca elula yanamhlanje, ifanitshala etofotofo kunye nokugqitywa kweklasi. Iskimu sombala zingwevu ezimnyama ezidityaniswe nokugqitywa kweenkuni ze-mahogany ezongeza umnxeba wokwamkela ubushushu kwindawo. Iindonga kunye nophahla zingwevu, kunye nebhodi emnyama kunye nodonga lokukhanya okukhanyayo xa kufuneka njalo. Imigangatho yikhaphethi egreyini egudileyo enemfumba ephakathi, iyenza ukuba ikhululeke ukuba ufuna ukuhlala phantsi. Udonga lwesikrini / lweprojekti ligxininisiwe kwigumbi lonke njengoko udonga lwayo lugqityiwe ngee-laminates ze-mahogany. Iintambo zifihliwe ngasemva kwale phaneli elaminethiweyo yokujonga okucocekileyo.
Kule mbono yeqonga lasekhaya, uya kubona ukuba igumbi linezinga eliphezulu kunye nelisezantsi. Inqanaba eliphezulu liqonga eliphakanyisiweyo apho unokufumana khona isofa enokuhlala abantu abathathu okanye nangaphezulu, ngelixa kwinqanaba elisezantsi, uyakufumana izihlalo zegumbi lokuphumla ezi-2 kunye netafile esecaleni emnyama phakathi kwabo.
Leholo yemidlalo yekhaya isebenzisa umthunzi omhle wepeyinti ye-marsala kuzo zombini iindonga kunye nophahla, kwaye yenziwe ngebhodi emhlophe kunye ne-cornice. Umgangatho ugqunywe ngekhaphethi ebomvu enepateni yedayimani yegolide ukongeza kwintuthuzelo nobuhle bendawo. Udonga lwamajelo eendaba luneprojektha elula kunye neyunithi eyakhiweyo yeaudiyo, kwaye kwizihlalo, kukho amanqanaba amabini kwaye omabini anezitulo ezi-3 ezihlala abantu abamnyama besikhumba abamnyama.
Eli gumbi leendaba / ikhaya lemidlalo yeqonga lihamba umgama ongezelelweyo ukuze libenokubukeka okunethezeka ngakumbi. Iindonga zinepeyinti enombala osisiseko sokhrimu, ukubumba kwegolide kunye nephepha elibomvu-negolide lodonga oluhambelana nophahla lwecoffer eneenkcukacha kunye nokugqitywa / unyango olufanayo neendonga. Imigangatho igcwele ngombala obomvu kunye neepateni ezifakwe kumbala ofanayo. Ngodonga lwayo lweendaba, akukho yunithi ye-elektroniki ibonakala ecaleni kwescrojektha seprojektha kunye neqonga eliphantsi, kwaye ukuhlala, kukho amanqanaba amabini kwaye omabini anikezwe izihlalo zamakhwenkwe ezinamavila ezimdaka nge-velvet.
Uyilo lweqonga lasekhaya luhle kwaye luyathandeka, lufezekile kwabo banendawo encinci yegumbi. Uninzi lwendawo lunemibala ekhanyayo egqityiweyo: iindonga ezimhlophe ezithambileyo, umgangatho okhanyayo wekhaphethi, ukukhanya okukhanyayo kwesofa eyi-L. Udonga lwamajelo eendaba, nangona kunjalo, luhonjiswe ngokhuni olunamabala amnyama. Ineekhabhathi ezakhelwe ngaphakathi apho kugcinwa khona izinto ezinxulumene nemidiya. Izithethi ziqhotyoshelwe eludongeni kodwa zifihliwe ngekholamu ye-faux egqityiweyo nge-veneers efanayo emnyama.
ithini kwibhayibhile ngomtshato
Uyilo lweqonga lasekhaya ludibanisa i-beige kunye nomthunzi weplum onzulu kwisikimu sombala ongaphezulu kwayo yonke. Iindonga zifakwe iipaneli, ngokudityaniswa kwe-beige, ukubumba okumhlophe kunye neplum. Udonga lwamajelo eendaba lulungiswe ngescreen seprojektha enkulu elula, kwaye imigangatho igqityiwe ngekhaphethi ye-beige eneepateni ezilula zedayimane. Kwizitulo, kulungiswe izihlalo ezi-3 zeplum yesikhumba eyonyusileyo amakhwenkwe angamavila.
Olu luhlengahlengiso lwasekhaya lweethiyetha elula, eneendonga ezenziwe ngeminquma, imigangatho yekhaphethi ye-beige kunye nomgangatho okumgangatho omabini olungiswe ngezihlalo zabafana abanobuvila besikhumba. Udonga lwamajelo eendaba yikhabhathi yemidiya elula eshukumayo kwisiphelo se-mahogany. Izithethi zifihlwe emva kweekhabhathi ezinobuso bomnyango welaphu ukuvumela isandi, kwaye kwiscreen, iTV TV enkulu ibekwe kwikhabhathi yeendaba.
Imibala elula elula esetyenziswe kweli gumbi leendaba inika le midlalo yasekhaya isibheno esihlaziyayo nesicocekileyo. Iindonga zimhlophe, kwaye imigangatho yindawo ekhaphukhaphu ekhanyayo. Udonga lwamajelo eendaba yimodyuli yekhabhathi yemithombo yeendaba emiselweyo enesikrini esikhulu seprojektha esenziwe ngombala omnyama, ngelixa ikhabhathi leendaba ngokwalo laminishwe kwimephu, ehambelana nokugqitywa kweengcango kunye neeshelfu zesela lewayini. Izihlalo zilula kodwa izitulo zala maxesha zikhululekile ezifakwe kwilaphu elikhanyayo le-beige.
Uyilo lweqonga lasekhaya lulula kakhulu kwaye lusisiseko, kodwa eyona nto ibalulekileyo kweli gumbi iya kuba luphahla lwayo lwesibhakabhaka kunye nenqaku lalo lokukhanya. Igumbi ngokwalo lilula kwaye lala maxesha, lineprojektha elula, iindonga eziluhlaza kunye nekhaphethi, kunye nezihlalo ezimnyama zesikhumba. Ngaphandle kwesibane esibhakabhakeni kunye nophahla lwendonga oluhlaziyayo, ikwanayo nefayibha yokukhanya yenkwenkwezi efakiweyo, ke ebusuku xa kumnyama, ungabona iinkwenkwezi endaweni yodonga.
Ixabisa malini u-dj emtshatweni
Olu luyilo luyafana nomzekelo wesithathu weqonga lasekhaya, njengoko usebenzisa umthunzi we-marsala wepeyinti kwiindonga zayo nakwisilingi. Zimbini iifestile kwigumbi, kodwa zenziwe mnyama ngamabhodi eplanga azotywe ngomthunzi omnyama obomvu. Umgangatho yikhaphethi ebomvu enamachaphaza amancinci amthubi, kwaye ifanitshala esetyenzisiweyo ngamakhwenkwe amhlophe angamavila amhlophe. Udonga lwamajelo eendaba alula, inesikrini seprojektha kuphela kunye nezithethi ezibini ezisemgangathweni kwicala ngalinye
Ngolwazi lweklasikhi, uyilo lweqonga lasekhaya luya kujonga okusikhumbuza amanqanaba amancinci / iithiyetha. Inodonga oluvalelweyo apho uyakufumana khona iprojektha yesikrini, kwaye kukho ikhethini elibomvu onokuthi uligqume. Kukho ishelufu encinci encinci ngasekunene ukugcina nokubeka abadlali beendaba, iiCD kunye nezinye izinto ezinxulumene noko. Ifenitshala, inamakhwenkwe amdaka ngesikhumba amdaka, ama-3 kwinqanaba ngalinye, kunye netafile encinci kwinqanaba eliphezulu elinesitulo somqhubi weendaba. Enye into enomdla kweli gumbi sisilingi esimnyama esineebhodi ezibonisa embindini, zisinika into eyahlukileyo yanamhlanje.
Mikhulu kunemizekelo yangaphambili, le theatre yasekhaya iyakwazi ukuhlala abantu abali-16 ngaxeshanye. Amanqanaba amabini asezantsi anezihlalo zesitayile se-cinema ezinesitayile esine-red velvet upholstery, ngelixa inqanaba eliphezulu linee-4 ezibomvu ze-velvet-upholstered boys ezingamakhwenkwe. Igumbi liguqula iskimu sombala omnyama wezimvi kunye nabamnyama: iindonga ezingwevu ezineempawu ezimnyama, iibhodi ezipeyintiweyo ezimnyama ezimnyama kunye nekhaphethi emnyama engwevu.
Olu luyilo lufezekile kwithiyetha encinci yanamhlanje, enegumbi lokuhlala eliqhelekileyo. Zonke iindonga zigqityiwe ngeethayile zamatye ngombala we-mocha okhanyayo, ukongeza ubume kunye nephethini kumphezulu wodonga. Imigangatho ilaminishwe ngomthi ubungakanani obufanayo neetayile zelitye ezindongeni, zongeza iphethini eqhubekayo ezindongeni nasemigangatho. Inesikrini esikhulu seprojektha eludongeni kunye neconsole encinci yemidiya esezantsi. Ifenitshala sisofa elula emdaka enebhentshi ehambelana nayo kunye netafile encinci esecaleni emnyama.
Isikimu sale theatre encinci yasekhaya sikwii-reds: ukusebenzisa i-red carpet flooring kunye ne-red Mahogany laminate yokugqiba iindonga zayo. Icala elisezantsi leendonga linokukhanya okufihliweyo ukunceda ukukhanyisa iindlela zokuhamba xa zicinyiwe izibane. Izithethi zidityaniswe kwiindonga nge-niche, kwaye iipaneli ze-acoustic zesilingi zongeza ubume kunye nephethini kwigumbi.
Olu lolunye useto lwasekhaya nolulula. Umgangatho yikhaphethi ye-beige elula, ngelixa iqonga layo eliphakanyisiweyo ligqityiwe ngamaplanga. Kwiindonga, iindonga ezisezantsi zipeyintwe kumthunzi obomvu ocacileyo ngelixa iindonga eziphezulu zikwisithunzi esimhlophe esimhlophe, senziwe ngebhodi emhlophe esezantsi kunye nosijelo woosihlalo. Udonga lwamajelo osasazo lunesikrini esikhulu seprojektha kumgama otofotofo ukusuka kwizitulo ezimnyama zesikhumba samakhwenkwe amnyama.
Olunye uyilo lwemidlalo yeqonga enobuhle be-neo-classic, olu luyilo lusebenzisa iindonga ezisezantsi ezenziwe ngamaplanga, kunye neekholamu zefeksi njengezinto zoyilo. Iindonga ezingaphezulu zicacile kwaye zipeyintwe ngombala we-mocha kunye neesconces zodonga kwaye imigangatho ineephephethi ezimnyama ezimfusa. Kwifenitshala inezitulo ezimnyama zolusu zesikhumba.
Olu luyilo olwahlukileyo nolwanomdla wale mihla kwithiyetha encinci yasekhaya. Iindonga ze-mocha-zipeyintwe zinepateni enomdla eyenziwe ngesakhelo senkuni esixandeni esilungiswe kwipateni yeherringbone, esongeza ubume kunye nomdla kwiindonga. Isikrini seprojektha senziwe ngomthi kwakumthunzi omnye omnyama we-mocha osetyenziswa kwiiphaneli zomthi ezixande, ngelixa imigangatho igcwele ukukhanya nge-beige. Ifenitshala sisofa elula yemodyuli, iibhentshi ezenziwe ngerattan kwi-beige, 2 iitafile ezisecaleni zegolide kunye neereyi ezinkulu zokuhombisa zefilimu njengezincedisi.
Igumbi lokuhlala elonwabisayo-lendlu yeshashalazi iyabukeka kwaye inenjongo ezininzi kunendlela yokusetha imidlalo yasekhaya. Lo ngumzekelo olungileyo woku. Ineefestile ezinkulu onokuzivala ngamakhethini amnyama-phandle kwaye unike indawo yokuhlala ekhaya. Umgangatho ziithayile ezizodwa ezinombala we-rustic, ngelixa iindonga zicacile kumthunzi wokutya we-oat. Udonga lunee-niches ezincinci zezithethi, ikhonsoli yokonwaba esezantsi phantsi kwescrojektha seprojektha, isofa enkulu yemodyuli engwevu ekwaziyo ukuhlalisa abantu abayi-6 okanye nangaphezulu, itafile yekofu, ityali enkulu yendawo kunye nebhentshi lesikhumba elirhuqileyo emva kwesofa enokusetyenziswa njengendawo yokuhlala eyongezelelweyo.
Iseti yemidlalo yeqonga yasekhaya elula enesikimu sombala omdaka ongathathi hlangothi - ineendonga ezimdaka ngombala omdaka, umgangatho okhanyayo okhaphethi, izihlalo zamakhwenkwe ezimdaka ngesikhumba kunye nophahla olunombala ofanayo weendonga ukugcina umoya omnyama esithubeni. Ikhabhinethi yolonwabo ibekwe eludongeni niche kunye neLCD yeTV.
Enye into ekulula ukuyilandela yokusekwa kweqonga lasekhaya, ineendonga ezimdaka ze-sienna ezimdaka, isilingi engwevu kunye nomgangatho okhanyayo wekhaphethi emhlophe. Ezindongeni uya kubona ilaphu elimnyama elinyusiweyo elilelokuhombisa kwaye likwanceda kwi-acoustics yendawo. Kwimpahla yeempahla, inezihlalo ezimhlophe ezimnyama ezenziwe ngesikhumba kunye neshelufu yomthi ngasemva yokugcina abadlali beendaba kunye nezinye izinto ezifanayo.
Olu seto lunokusetyenziswa nakweliphi na igumbi lokuhlala lanamhlanje elincinci. Inepeyinti eluhlaza okwesibhakabhaka ezindongeni zayo, imigangatho emhlophe kunye nepaneli eludongeni eyenziwe ngomthi ukuqaqambisa udonga lweendaba. Odongeni kukho i-TV enkulu ye-TV, kwaye kukho isofa enye kuphela kumgama ofanelekileyo ukusuka kwiscreen. Inezithethi zesandi ezingqonge umgangatho.
Iseti elula yasekhaya yemidlalo yeqonga enesikimu sombala omnyama nomhlophe. Uyabona ukuba uninzi lwegumbi limhlophe - imigangatho emhlophe, iindonga kunye nophahla ngaphandle kweebhodi zebhodi okanye i-cornice. Ikwanikezelwe kancinci, inamaqhekeza abalulekileyo kuphela.
indlela yokukhetha imibala yomtshato
Izimvo zemidlalo yeqonga lasekhaya egxile kubunzulu bemboniso bhanyabhanya ngaphandle kokuhombisa okuncinci okanye ukuphazamiseka. Kule mbono yeqonga lasekhaya, uya kubona indawo emnyama emnyama ebeka indawo yokuhlala, isofa eyinkwenkwana eyonqenayo, itafile yekofu emnyama yanamhlanje kunye netafile yeendaba. Ukuseta yinto encinci yanamhlanje, ikunika zonke izinto eziyimfuneko kwithiyetha yasekhaya ngaphandle kokubeka izinto ezingafunekiyo kwindlela yakho.
[yandisa isihloko = bonisa oovimba bolwazi swaptitle = Fihla oovimba bolwazi] (1) frederickhomesforsale ukusuka kwiFlickr (iLayisensi ye-Creative Commons)
(Mbini) gsloan ukusuka kwiFlickr (iLayisensi ye-Creative Commons)
(3) imable ukusuka kwiFlickr (iLayisensi ye-Creative Commons)
Amanqanaba aKhaya aHlangayo angaphakathi: Ungathanda:
Iingcamango zebar yasekhaya - Uyilo lweGumbi lokuPhila - Igumbi lokuHlala lokuHombisa iiMbono - Uyilo oluGqwesileyo lweGumbi lokuPhila
indlela yokulinganisa i-tux
Ezona ntetho zibalaseleyo zomzalwana omdala
uya kuba yibhokisi yam yomtshakazi
into ebolekiweyo, into entsha
Uluhlu lwehood ngaphezulu kwesiqithi
izipho zomtshato izimvo zomyeni